ट्रान्सकिप्ट के हो ? कसरी बनाउने ? जन्नुहोस – ताजा समाचार
ट्रान्सकिप्ट के हो ? कसरी बनाउने ? जन्नुहोस
कक्षा ११/१२ मा प्रत्येक विषयमा D+ वा सो भन्दा धेरै ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले यहि श्रावण २८ गते देखि ट्रान्सकिप्टको लागि आवेदन दिन सक्ने छन् ।
अन्तिम जानकारी: ट्रान्सकिप्ट बनाइसकेपछि ११/१२ को ग्रेडसीट पनि सुरक्षित साथ राख्नुहोला । किनकि ग्रेडसिट पनि जीवनको कुनै मोडमा नभई नहुने हुन सक्छ ।
अब त सबै कुरा बुझ्नुभयो होला नि ? मन परेमा सेयर गर्नुहोला है त् !